RASMI: Kooxda Manchester City oo ku dhawaaqday caawiyaha cusub ee tababare Pep Guardiola – Gool FM
Dajiye June 9, 2020
(Manchester) 09 Juun 2020. Kooxda Manchester City ayaa ku dhawaaqday in Juan Manuel Lillo uu ku soo biiray shaqaalaha tababarka ee macalin Pep Guardiola, si uu u noqdo badelka Mikel Arteta oo ku biiray naadiga Arsenal.
Shaqadan darteed Juan Manuel Lillo ayaa go’aansaday maalmo ka hor inuu kansalo heshiiska uu ku joogay kooxda reer China ee Qingdao Huanghai, halkaasoo uu ka ahaa tababare sare.
Juan Manuel Lillo oo da’adiisu aheyd 54 jir ayaan horey u noqon ciyaaryahan kubadda cagta ah, laakiin wuxuu soo maray khibrado badan markii uu ahaa tababare iyo caawiye, wuxuuna tababare u soo noqday Real Sociedad, Almería, Real Zaragoza, Tenerife iyo kooxo kale badan oo Spain ka dhisan.
Haddaba war rasmi ah ee ka soo baxay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxaa lagu sheegay:
“Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno ku biiritaanka Juan Manuel Lillo ee kooxda Pep Guardiola, si uu u noqdo ku xigeenka macalinka”.
Lionel Messi oo laabta u qaboojiyey taageerayaasha kooxda Barcelona